ओली उपस्थित नहुनु लोकतान्त्रिक संस्कार कि अलोकतान्त्रिकः प्रचण्ड - निष्पक्षखबर
काठमाडौः विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले राखेको प्रस्तावमाथि आज साँझ प्रतिनिधिसभामा भएको छलफलमा भाग लिँदै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली उपस्थित नहुनु लोकतान्त्रिक संस्कार हो कि अलोकतान्त्रिक भनेर प्रश्न गरेका छन् ।
‘मैले यहाँ आएपछि हाम्रो प्रमुख सचेतकलाई तीनपटक सोधेँ– निवर्तमान प्रधानमन्त्री आउनुहुन्छ ? बोल्नुहुन्छ ? उहाँले आउनुहुन्छ भन्नुभयो,’ प्रचण्डले भने, ‘तर बिरामी भएर हो कि के हो मलाई थाहा छैन उहाँ बोल्नुभएन । पुनस्र्थापित पहिलो बैठकमा यो सदन र देशले ओलीकै मुखबाट आफ्ना कुरा सुन्न चाहेको बताए ।
प्रधानमन्त्री देउवालाई आफ्नो दलले विश्वासको मत दिने उनले बताए ।
ओली बैठकमा सहभागी नभएपछि एमालेका सचिव प्रदीप ज्ञवालीले पार्टीको धारणा राख्दै प्रधानमन्त्री देउवालाई विश्वासको मत नदिने बताएका थिए ।
Pingback: नागरिकता सम्बन्धी माग पूरा गरेकोमा ओलीलाई ठाकुरले दिए धन्यवाद, देउवालाई विश्वासको मत दिने - निष